သွေးတိုးခြင်းကို လျော့ပါးစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ ချက် - Hello Sayarwon
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း )
Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) (ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း)
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်း Tuberculosis (တီဘီရောဂါ) Pulmonary embolism (အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း) Anaphylaxis (ပြင်းထန်သောဓာတ်မတည့်မှု)
Chorionic Villus Sampling (အချင်းဆဲလ်စစ်ဆေးခြင်း) Ca 19-9 Tumor Marker (စီအေ ၁၉-၉ ကင်ဆာညွှန်းကိန်း ဆိုတာဘာလဲ) Total Serum Protein Test (သွေးတွင်းအလုံးစုံအသားဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း) Cotinine ((ကိုတီနင်း) စစ်ဆေးခြင်းဆိုတာ)
အက်တက်စီ Actrapid(Soluble Insulin) (အက်ထရာပစ်ဒ်(ပျော်ဝင်နိုင်သောအင်ဆူလင်)) Beazyme (ဘီဇိုင်း) Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း)
Ash Gourd (ကျောက်ဖရုံသီး) စမုန်နက်စေ့ဆီ Marijuana (ဆေးခြောက်) Mangosteen(မင်းဂွတ်)
ခေါင်းချွေးနံ့နံခြင်း ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ အသားအရေခြောက်တဲ့သူတွေ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေး၊ အစိုဓါတ်ထိန်းခရင်မ်နဲ့ အစားအစာ သုံးတဲ့ အလှကုန်တွေက ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက်များ မျက်ခုံးမွှေး ထူထူနက်နက်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းများ
သိထားရမည့် မတည့်သောအစားအသောက်များ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက် အစားအစာများ ဆီးချိုအတွက်အသင့်အစားအစာအကြံဥာဏ်ကောင်းများ ပျို့ခြင်းအတွက်အစားအစာများ
အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှုပေးမလဲ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီးရင် ကိုယ်ဝန်ရမသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲ IUD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆအမှားများ
ယောဂက စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်သင့်သောအကြောင်းရင်းများ အကောင်းမြင်စိတ်စွမ်းအား စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်အာင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ
ကလေးများကိုသွားကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ သွားကိုထိခိုက်စေတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အမူအကျင့် ၁၂ ခု အသီးဖျော်ရည်တွေက သင့်သွားတွေကို ပျက်စီးစေသလား နှလုံးရောဂါသမားများအတွက် သွားကျန်းမာရေး
မနက်ခင်းရေချိုးတာက ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်လား လူမှုကွန်ရက်ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုကြမယ် ဒရင်ကောက်ပင်၏ အံ့ဖွယ်(၇)ချက် သင့်မျက်နှာကပြောပြနေတဲ့သင့်ကျန်းမာရေး
ကင်ဆာအကျိတ်ဆဲလ်တွေကို ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း စစ်ဆေးသိရှိနိုင်မယ့် ကိရိယာ ကင်ဆာတိုက်ဖျက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းသစ် ဦးနှောက်ကင်ဆာကို ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ကုသနိုင် ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်မယ့် သရက်သီး
လက်မထပ်ခင် ဘယ်နှရက် ကြိုတင်ပြီး ကိုယ်ဝန်တားသင့်သလဲ သားဆက်ခြားဖို့အတွက် စဉ်းစားစရာအဆင့်ဆင့် အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန် မွေးရာပါနှလုံးရောဂါသည်တွေ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လား
မိခင်ရဲ့ စားသောက်ပုံက သန္ဓေသားရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအပေါ်ဘယ်လို သက်ရောက်နိုင်လဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးပေါင်ကျခြင်း ပက်လက်အိပ်ခြင်းသည် ကလေးအသေမွေးနှုန်းကို များစေပါသလား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဘာကြောင့် အစာကို အများကြီး မစားသင့်ပါသလဲ
မိခင်၏အချင်းအား စားသုံးခြင်း။ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ လမစေ့မီ ကလေးမွေးခြင်း ကလေး ဘယ်လိုမွေးဖွားသလဲ မွေးခန်းထဲက မိခင်တွေကို ဖခင်တွေက ဘယ်လို ဖေးမကူညီကြမလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်သလဲ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ သားဆက်ခြားဖို့အတွက် စဉ်းစားစရာအဆင့်ဆင့် အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်အာဟာရ ၁၀မျိုး
ကလေးငယ် လုံလောက်တဲ့ မိခင်နို့ရရှိလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ စိတ်က နို့ထွက်ခြင်းအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိမလဲ နို့တိုက်ခြင်းက ကလေးစားသောက်ပုံကို ဘယ်လိုသက်ရောက်စေလဲ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း နှင့် မှက္ခရုရောဂါ
၃၂ ပတ်သားကလေး 47 ပတ်သားကလေး ကလေးတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ရေစတိုက်လို့ ရသလဲ9ပတ်သားကလေး
အသီးအရွက်နဲ့ သစ်သီးတွေကို ကလေးတွေအကြိုက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ ၄ နှစ် နှင့် ၅ နှစ် ကလေးငယ်များအတွက် အစားအသောက်နှင့် အာဟာရ 35 လအရွယ်ကလေးငယ် 34 လအရွယ်ကလေးငယ်
ကလေးရဲ့အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာများ မျှတသော စားသောက်မှုပုံစံဆိုတာ ဘာလဲ ကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်သော သွားရေစာများ ထမင်းစားချိန် ပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
သင့်ကလေးကို နူးညံ့ချောမွတ်တဲ့အသားအရေပိုင်ဆိုင်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် အုန်းဆီရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ကလေးငယ်တွေကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူများ ပိုးမွှားကိုက်ခံရတဲ့ကလေးမှာဖြစ်တဲ့ အရေပြားပြဿနာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းက ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။ ကလေးကို တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းစေရန်နည်းလမ်းတွေ ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ ရေကျောက်၏လက္ခဏာများကို စီမံနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း
သင့်ကလေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးအသားအရေထိန်းပစ္စည်း ရွေးချယ်ဖို့ သင့်ကလေးကို နူးညံ့ချောမွတ်တဲ့အသားအရေပိုင်ဆိုင်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲ ကလေးရဲ့အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာများ ဖခင်တစ်ယောက်အတွက် ကလေးစောင့်ရှောက်နည်းလမ်းညွှန်
သင့်ကလေးကို မဖြစ်မနေ ပြောပြထားရမယ့် အချက်(၇)ချက် ကလေးကို တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းစေရန်နည်းလမ်းတွေ ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြီးပြင်းလာအောင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ ကလေးတွေရဲ့သင်ယူလေ့လာမှုပိုမြန်ဆန်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကုသပြီးနောက် နေထိုင်နည်း အိမ်ထောင်ပြုခြင်း, ချိန်းတွေ့ခြင်း နှင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြောက်လန့်မှုနဲ့ ဘယ်လို သဟဇာတဖြစ်အောင် နေထိုင်မလဲ ကလေးငယ်တွေကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ
သားအိမ်ကင်ဆာတစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေသိသင့်သလဲ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့် အခြားကုသနိုင်သော နည်းလမ်းများ သားအိမ်ကြွက်သားကင်ဆာအား ကုသခြင်း သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နေကြောင်း သိသင့်သည့် လက္ခဏာများ
အိမ်ထောင်ပြုခြင်း, ချိန်းတွေ့ခြင်း နှင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကလေးငယ်တွေကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကုသပြီးနောက် နေထိုင်နည်း သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြောက်လန့်မှုနဲ့ ဘယ်လို သဟဇာတဖြစ်အောင် နေထိုင်မလဲ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် လုပ်သင့်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ဘယ်လိုစားသောက်သင့်လဲ
ပိတ်ရက်တွေအတွက် ဆီးချိုရှိသူတွေ ဘယ်လိုကြိုပြင်ဆင်ကြမလဲ။ အောက်ဆီဂျင်အသုံးပြုရသော ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို မည်သို့ အကျိုးပြုပါသနည်း။ ခွဲမွေးခြင်းနဲ့ ကလေးသူငယ် အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုနဲ့ ဘာကြောင့် ဆက်စပ်မှုရှိတာလဲ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် အမျိုးအစား ၂ မျိုး
ခွဲမွေးခြင်းနဲ့ ကလေးသူငယ် အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုနဲ့ ဘာကြောင့် ဆက်စပ်မှုရှိတာလဲ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် အမျိုးအစား ၂ မျိုး ဆီးချိုအတွက်အသင့်အစားအစာအကြံဥာဏ်ကောင်းများ စိတ်အားထက်သန်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ
ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သောခံစားချက်များ အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် မျှတတဲ့ အစားအသောက် ဆီးချိုရုတ်တရက်တက်လာရင် အရေးပေါ်ဘယ်လိုကုသမလဲ ဆီးချိုသမားတွေရဲ့ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာပါတဲ့ ကယ်လ်လိုရီတွေကို ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲ
ပိတ်ရက်တွေအတွက် ဆီးချိုရှိသူတွေ ဘယ်လိုကြိုပြင်ဆင်ကြမလဲ။ အောက်ဆီဂျင်အသုံးပြုရသော ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို မည်သို့ အကျိုးပြုပါသနည်း။ ဆီးချိုကိုယ်ဝန်ကြောင့်အော်တစ်ဆင်ရောဂါဖြစ်လာနိုင်လား ဆီးချိုရောဂါကို ပိုဆိုးစေသော အလေ့အထဆိုးများ
သွေးတိုးခြင်းအတွက် စိတ်ချရသောဆေးဝါးများ သွေးတိုးရောဂါအတွက် ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုး ဆေးစွမ်းကောင်းများ သွေးတိုးခြင်းကို လျော့ပါးစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ ချက် အမျိုးသားများအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း
သွေးတိုးရောဂါအတွက် ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုး ဆေးစွမ်းကောင်းများ သင့်​မှာ​သွေးတိုးရှိ​နေရင်​ sleep apnea (အိပ်​​နေစဉ်​ခဏတာအသက်​ရှူရပ်​ခြင်း) အ​ကြောင်း ​လေ့လာထားပါ။ ​​သွေးတိုးခြင်းက ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းကို ဖြစ်​​စေသလား ? စိုးရိမ်​​ကြောင့်​ကြပူပန်​မှု​တွေက ​သွေးတိုး​စေသလား
အမျိုးသားများအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း Home Blood Pressure Test (အိမ်မှာ သွေးပေါင်ဘယ်လိုချိန်မလဲ) သင့်မှာ ​သွေးတိုးရှိ​နေရင်​ သင့်ကိုယ်သင်​ ဘယ်​လိုဂရုစိုက်​ရမလဲ ဆရာဝန်​အ​နေနဲ့ ​ကိုယ်​ဝန်​ဆိပ်​တက်​ခြင်း​ရောဂါတွေဖြစ်​တဲ့ preeclampsia, eclampsia နဲ့ HELLP syndrome သုံးမျိုး ကိုဘယ်​လိုခွဲခြားသတ်​မှတ်​မလဲ။
သွေးတိုးခြင်းအတွက် စိတ်ချရသောဆေးဝါးများ သွေးတိုးခြင်းကို လျော့ပါးစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ ချက် သင့်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဘယ်လောက်မှာ ထိန်းထားမလဲ သင် လေ့ကျင့်​ခန်း ဘယ်​​လောက်​လုပ်​ဖို့ လိုအပ်​လဲ
မွေးရာပါနှလုံးရောဂါသည်တွေ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လား နှလုံးဖောက်၍ ခွဲစိတ်ကုသပြီးသူများကို မည်သို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မည်နည်း နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် စားသောက်နည်း နှလုံးကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့အတွက် အရသာရှိသော အစားအစာများအကြောင်း
မွေးရာပါနှလုံးရောဂါသည်တွေ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လား နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တွက်ချက်ခြင်း နှလုံးသွေးကြောချဲ့ခြင်း၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများ နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းအကြောင်း
နှလုံးဖောက်၍ ခွဲစိတ်ကုသပြီးသူများကို မည်သို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မည်နည်း နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် စားသောက်နည်း နှလုံးကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့အတွက် အရသာရှိသော အစားအစာများအကြောင်း နှလုံးရောဂါသမားများအတွက် သွားကျန်းမာရေး
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါသည်များ ရှောင်ရမည့် အစားအသောက်များ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနှင့် ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ခြင်း ဆက်နွယ်မှု နှလုံးရောဂါကုသမှုများ- ဘ၀ကိုပြောင်းလဲပေးသော နည်းပညာသစ်များ ပေါ်ထွက်လာခြင်း နှလုံးခွဲစိတ်ခြင်း
ကင်ဆာကုထုံးရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း,ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ရင်သားကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာနှင့် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း ဓာတုကုထုံးလုပ်နေချိန်မှာ အရေပြားနဲ့လက်သည်းပြောင်းလဲမှုတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ
ရင်သားကင်ဆာနှင့် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း အီစထရိုဂျင်တုံ့ပြန် receptor များ ရှိသော ရင်သားကင်ဆာ (ER ရင်သားကင်ဆာ) ရင်သားကင်ဆာ- ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုခံယူခြင်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျှော့ချပေးသော ဆေး - Tamoxifen (တာမော်စီဖန်)
အိမ်ထောင်ပြုခြင်း,ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ရင်သားကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာအပြီးမှာ သင့်အမျိုးသမီးကို ဘယ်လိုပံ့ပိုးကူညီမလဲ သင့်ရဲ့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာကင်ဆာအတွက် အရင်းအမြစ်တွေ ဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲ သင့်ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း သင့်ကလေးသိနားလည်အောင်အကူအညီပေးပါ
ကင်ဆာကုထုံးရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ ဓာတုကုထုံးလုပ်နေချိန်မှာ အရေပြားနဲ့လက်သည်းပြောင်းလဲမှုတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ ရင်သားကင်ဆာရှိသူတွေမှာ ဓာတ်စာတွေဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့ ရင်သားကင်ဆာ
အရိုး နဲ့ ကြွက်သား ကျန်းမာရေး
Hello Sayarwon » သွေးတိုးရောဂါ » သွေးတိုးခြင်းကို လျော့ပါးစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ ချက်
သွေးတိုးခြင်းကို လျော့ပါးစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ ချက်
ရေးသားသူ Kyaw Thura Htun ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
သင်​​သွေးတိုးခဏခဏစစ်​ပါသလား ? သင့်​​သွေးတိုးက မြင့်​​လိုက်​၊ ပုံမှန်​ဖြစ်​လိုက်​၊ ကျလိုက်​ဖြစ်​​နေတာကို​တွေ့ရပါသလား ? ဒါကသင့်​မှာ ​သွေးတိုးအကြိုဖြစ်​ဖူးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ​သွေးတိုးအကြိုနဲ့ ​သွေးတိုးနှစ်​ခုလုံးက နှလုံးနဲ့ ​လေဖြတ်​ခြင်းတို့အတွက်​ ဆိုးရွားတဲ့​ရောဂါ​တွေပါ။ လူငယ်​​တွေမှာမဖြစ်​ဘူးလို့မထင်​ပါနဲ့။ ငယ်​ရွယ်​စဉ်​တည်းက ဘဝကအလုပ်​များပြီး စိတ်​ဖိစီးမှု​တွေများခြင်းက ​သွေးတိုးဖြစ်​ခြင်းကို ပိုမြန်​​စေပါတယ်​။
အစားအစာဆိုတာ ကျွန်​​တော်​တို့အသက်​ရှင်​​နေထိုင်​ဖို့အတွက်​ လိုအပ်​တဲ့အရာတစ်​ခုပါ။ ဒါ​ပေမယ့်​ အစားအစာအ​ရွေမတတ်​ရင်​ သင်​​ရောသင့်​မိသားစုပါထိခိုက်​နိုင်​ပါတယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​အခုကစပြီး ဆိုဒီယမ်​နည်းနည်းနဲ့ ပိုတက်​ဆီယမ်​ များများပါတဲ့အစားအ​သောက်​ပုံစကို​ပြောင်းလဲရပါမယ်​။
အ​ကြောင်းက ပိုတက်​ဆီယမ်​က ​သွေးတိုးကျ​စေလို့ပါ။ ဒါ့အပြင်​ အသီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်​ ​တွေလည်းစားသင့်​ပါတယ်​။ အဆီများတဲ့အသား​တွေစားမယ့်​အစား အဆီနည်းတဲ့ငါး​တွေ ကြက်​ဘဲ​တွေကိုစားသင့်​ပါတယ်​။ တခြားအဆီ​တွေကိုလည်း ​ရှောင်​သင့်​ပါတယ်​။
အ​မေရိကန်​​တွေအတွက်​ အစားအ​သောက်​လမ်းညွှန်​ချက်​မှာ​တော့ အရွယ်​​ရောက်​ပြီးသူတစ်​​ယောက်​ဟာ တစ်​​နေ့ကိုဆား၂၃၀၀မိလီဂရမ်​​အောက်​ စားလို့ရပါတယ်​။ အသက်​ ၅၁ အထက်​လူ​တွေမှာ​တော့ တစ်​ရက်​ကို ဆား ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်​ဘဲစားလို့ရပါတယ်​။ ဆားကိုဘယ်​လို​လျှော့စားရမလဲ ? ​အောက်​ပါနည်း​တွေကိုသုံးပါ။
စား​သောက်​ကုန်​တစ်​ခူချင်းစီမှာ စာတန်းထိုးထားတဲ့ ဆားပါဝင်​မှုကို​သေချာဖတ်​ပါ။ ဒါမှ သင်​ကတခြားစား​သောက်​ကုန်​​တွေနဲ့ ယှဉ်​ကြည့်​နိုင်​ပြီး ဆိုဒီယမ်​ပါဝင်​မှုအနည်းဆုံးကို​ရွေးနိုင်​မှာပါ။
အဆင့်​ဆင့်​ပြလုပထားတဲ့အစားအစာ​တွေ သိပ်​မစားပါနဲ့ ဥပမာ – ကြက်​အူ​ချောင်း၊ ဝက်​သားပြား ဒါမှမဟုတ်​​အေးခဲထားတဲ့ ထမင်းဘူး နဲ့ အသင့်​စား​ခေါက်​ဆွပြုတ်​
​နေ့စဉ်​ ချက်​ပြုတ်​ရာမှာလည်း ဆား​လျှော့ပါ။
​သွေးတိုးကျ​စေဖို့က ကိုယ်​လက်​လှုပ်​ရှား​ပေးခြင်းက နည်းလမ်းတစ်​မျိုးပါဘဲ။ ဒါက စိတ်​ဖိစီးမှုကင်း​စေတဲ့အပြင်​ နှလုံး​သွေး​ကြော၊ ကြွက်​သား၊ အရိူးနဲ့ ​သွေးလည်​ပတ်​မှုနဲ့ပတ်​သက်​တဲ့ပြသနာ​တွေ ကာကွယ်​​ပေးပါတယ်​။ အရွယ်​​ရောက်​ပြီးသူ​တွေက တစ်​​နေ့ကိုကြံ့ခိုင်​​စေတဲ့​လေးကျင့်​ခန်း​တွေကို ၁၅ မိနှစ်​နှုန်းနဲ့သာမန်​​အေရိုးဗစ်​​လေ့ကျင့်​ခန်း​တွေကို​တော့ တစ်​​နေ့ မိနစ်​ ၃၀ နှုန်းလုပ်​​ပေးသင့်​ပါတယ်​။
တကယ်ို့သင်​ကအလုပ်​များသူဆိုရင်​ မနက်​ခင်းလမ်း​ဘျှောက်​တာတို့ ​ပြေးတာတို့လုပ်​နိုင်​ပါတယ်​။ သင့်​ကျန်းမာ​ရေးကိုကာကွယ်​ဖို့အတွက်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းတစ်​ရက်​နည်းနည်းစီ​တော့လုပ်​​ပေးဖို့လိုပါတယ်​။
အ​ပေါ်က​ပြောသွားတဲ့ ကိုယ်​လက်​လှုပ်​ရှားတာကလည်း ကိုယ်​အ​လေးချိန်​ကျ​စေပါတယ်​။ တကယ်​လို့သင်​ကအဝလွန်​​နေရင်​ တစ်​​နေ့ကို အဆီ ၂.၃ ကီလိုဂရမ်​ကျ​စေတာက အဆင်​​ပြေပါတယ်​။ သင့်​​တော်​တဲ့ကိုယ်​အ​လေးချိန်​မှာရှိတာကသင့်​ကို​သွေးတိုးနဲ့ တခြား​ရောဂါ​တွေဆီကကာကွယ်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။
အရက်​က​သွေးတိုး​စေတဲ့အ​ကြောင်းအရင်းဖြစ်​တဲ့အပြင်​ အသည်းထိခိုက်​​စေတဲ့ အ​ကြောင်းအရင်းတစ်​ခုပါ။ အမျိုးသမီးအရွယ်​တိုင်းက တစ်​​နေ့ကိုအရက်​တစ်​ခွက်​​သောက်​နိုင်​ပြီး အသက်​ ၆၅ နှစ်​​အောက်​အမျိုးသား​တွေက​တော့ တစ်​ရက်​ နှစ်​ခွက်​​သောက်​နိုင်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ အရက်​အစား အယ်​လ်​ကို​ဟောပါဝင်​မှုနည်းတဲ့ ဝိုင်​ကို​သောက်​သုံးနိုင်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ်​ တန်​​ဆေးလွန်​​ဘေးပါ။
ဒီ​နေ့​ခေတ်​မှာ စိတ်​ဖိစီးမှု​တွေ အဖြစ်​များကြပါတယ်​။ လူတိုင်းလိလိုက အလုပ်​၊ ဖျားနာမှု၊ မိသားစုနဲ့ ဆက်​ဆံ​ရေး​တွေ​ကြောင့်​ စိတ်​ဖိစီးဖူးကြပါတယ်​။ ဒီလိုစိတ်​ဖိစီးတာကို​ရှောင်​ကြဉ်​ဖို့အတွက်​ သင့်​​နေထိုင်​မှုပုံစံကို​ပြောင်းလဲလိုက်​ပါ။
ဥပမာ – ​လေ့ကျင့်​ခန်းမှန်​မှန်​လုပ်​ခြင်း၊ အိပ်​​ရေးဝဝအိပ်​ခြင်း၊ အသက်​ရှူ​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​ခြင်း၊ ​ဒေါသထိန်းချုပ်​ခြင်း​တွေဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ အတတ်​နိုင်​ဆုံးစိတ်​ဖိစီးမှုကို​လျှော့ကြပါ။
​သွေးတိုးစစ်​ဖို့​ဆေးရုံသွားစရာမလိုပါဘူး။ အိမ်​မှာ ​သွေးတိးတိုင်းကိရိယာဝယ်​တိုင်းနိုင်​ပါတယ်​။ တစ်​ရက်​နှစ်​ကြိမ်​တိုင်းသင့်​ပါတယ်​။ မနက်​နဲ့ညပါ။ မှတ်​ထားရမှာက မတိုင်းခင်​ ​ဆေးလိပ်​​သောက်​ခြင်း၊ ​ကော်​ဖီ​သောက်​ခြင်း၊ မျက်​စဉ်း​ဆေးခတ်​ခြင်း စတာ​တွေမလုပ်​ထားရပါဘူး။ ဒါ​တွေက ရလဒ်​ကိုသက်​​ရောက်​​စေလို့ပါ။ တကယ်​လို့ဒါကိုသင်​မှန်​မှန်​လုပ်​ရင်​ အ​လေ့အကျင့်​ရလာမှာပါ။
သွေးတိုးကျစေနိုင်မယ့် ရိုးစင်းတဲ့နည်းလမ်း ၅ သွယ်
သွေးတိုးရောဂါအတွက် ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုး ဆေးစွမ်းကောင်းများ
​သွေးတိုးကျဖို့ ​လေ့ကျင့်​ခန်း လုပ်​ခြင်း
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝငျဘာ 30, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝငျဘာ 30, 2017
သင့်မှာ ​သွေးတိုးရှိ​နေရင်​ သင့်ကိုယ်သင်​ ဘယ်​လိုဂရုစိုက်​ရမလဲ
ကျွန်​​တော်​ ​သွေးတိုး ဖြစ်​နိုင်​သလား
သင်​ဆီးချိုနဲ့​သွေးတိုးရောဂါအတွက် ​ဒီစား​သောက်​မှုစနစ်​ ၉ချက်​ကိုသိပါသလား
​​သွေးတိုးခြင်းက ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းကို ဖြစ်​​စေသလား ?